Nyefee Music si PC / Mac ka Android
Mepee software nke TunesGo ugbu na gị / Mac site abụọ na ịpị akara ngosi. A na ihuenyo dị ka n'okpuru ga-apụta.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ Android ekwentị
Jikọọ gị android ekwentị gaa na PC / Mac. Were USB na jikọọ na otu njedebe nke akporo ekwentị na ndị ọzọ na ndị USB post nke PC / Mac. Ị pụrụ ịhụ ejikọrọ ekwentị na n'aka ekpe menu n'okpuru Ngwaọrụ nhọrọ. (Nseta ihuenyo egosi SamsungGT-I9300 dị ka ejikọrọ ekwentị)
Nzọụkwụ 3. họrọ Android ekwentị
Pịa "music" na-ekpe menu nke Android ekwentị
Na ekpe n'akụkụ aka menu nke TunesGo peeji, họrọ Music nhọrọ n'okpuru Android ekwentị nke jikọọ. (Nseta ihuenyo-egosi nnọọ igbe)
Nzọụkwụ 4. Iji "Tinye" ọrụ
Gaa n'elu nke TunesGo na peeji nke na site ebe a họrọ "Tinye" menu na nhọrọ nke "Tinye faịlụ"
Nzọụkwụ 5. chọtara songs na PC / Mac (emeghe music nchekwa)
Ugbu a songs na ị chọrọ site na PC gị / Mac ka-zigara gị Android ekwentị mkpa ga-ahọrọ. Gaa na nchekwa ebe songs na PC gị na bụ ugbu a.
Nzọụkwụ 6. Họrọ Songs
Site nyere ndepụta, họrọ songs na ị chọrọ nyefee. (Nseta ihuenyo egosi 2 họrọ songs).
Nzọụkwụ 7. Ọma nyefe Android ekwentị
The họrọ songs ga-ọma zigara gị Android ngwaọrụ. Ị nwere ike ịlele songs n'okpuru Music nhọrọ nke ngwaọrụ. (Nseta ihuenyo egosi kpọfere songs na Music ndepụta dị n'okpuru SamsungGT-I9300 on n'akụkụ aka ekpe menu)
Ọzọ: PC / Mac ka iTunes